Ukubheka EKUGCINELWENI KWESIMEMO SEZANDLA ZANGAKHO
Inothi lomhleli: Lokhu kuyingxenye yochungechunge oluhlaziya isimo samanje nesizayo emakethe yezimpawu zedijithali. Ingxenye elandelayo izocubungula ukuthambekela kwesoftware.
Izimpawu zedijithali bezilokhu zikhulisa ngokushesha ukufinyelela kwazo cishe kuyo yonke imakethe nendawo, ikakhulukazi ngaphakathi. Manje, abathengisi abakhulu nabancane basebenzisa izibonakaliso zedijithali ngamanani amakhulu ukukhangisa, ukukhulisa ukuthuthukiswa komkhiqizo kwenziwe ngcono ikhasimende, ngokusho kweDigital Signage Future Trends Report. Kutholakale ukuthi izingxenye ezimbili kwezintathu zabathengisi ezihlolisisiwe bathe ukuthuthukiswa komkhiqizo kube yinzuzo enkulu yezimpawu zedijithali, kulandele ukwenziwa ngcono kwamakhasimende ngamaphesenti angama-40.
Isibonelo, uNordiska Kompaniet, umthengisi eStockholm, eSweden, waphonsa izibonakaliso zedijithali ngamabhande esikhumba ahlanganisiwe phezulu futhi walengisa lezo odongeni ukudala umbono wokuthi isibukeli silengiswe yibhande. Lokhu kusize ukubukisa ukuhlangana nomthengisi wesithombe sobucwebecwebe nobukhulu bomkhiqizo ophezulu.
Ezingeni elijwayelekile, isikhala sendawo yedijithali yangaphakathi sibona ukubonwa okungcono kokwenza ngcono uphawu lomkhiqizo, namathuluzi wokuzibandakanya angcono ukuthuthukisa ulwazi lwekhasimende.
Umkhuba owodwa omkhulu ukuhambisa kude nokuboniswa kwe-LCD kuya ezibukweni eziphezulu ze-LED, ngokusho kukaBarry Pearmen, umphathi ngaphakathi kwezentengiso, i-Watchfire. UPearman uphakamise ukuthi ukwehla kwezindleko zokuboniswa kwe-LED kuyasiza ukuqhuba lo mkhuba.
Ama-LED awagcini ngokuvama kakhulu, futhi asethuthuka kakhulu.
"I-LED besikhona isikhashana, siqhubeka sicindezela izimbotshana ezinzima, sisondela kakhulu kuma-LEDs," kusho uBrian Huber, umphathi wethimba lobuqambi, iTrafire. "Zisondele izinsuku zaleso siginali esikhulu esikhanyisela abalingiswa abangu-8 ngasikhathi."
Okunye ukuthambekela okukhulu ekufinyeleleni okubukelwa ngqo kwezibuko ze-LED ukudala okuhlangenwe nakho okumangazayo nokwesabekayo, ngokusho kukaKevin Christopherson, umqondisi wezokukhangisa komkhiqizo, i-NEC Display Solutions.
"Ukubuka okuqondile kwamaphaneli we-LED kuyenzeka ngokwezifiso futhi kungakha okuhlangenwe nakho okugoqela ababukeli noma ukudala amaphuzu agxile ekubumbeni," uChristopherson ekungeneni kwakhe ngombiko we-Digital Digital Signage Future Trends Report "Ngezinketho ze-pixel zanoma yini kusuka ekubukeni okusondele kuye ukubuka kude kwezindawo ezinkulu, abanikazi bangasebenzisa i-dvLED ukunikeza okuhlangenwe nakho okungafani ngokuphelele nokukhumbulekayo. "
Amathuluzi wokuzibandakanya angcono
Ukumane kube nombukiso ogqamile akwanele ukuletha okuhlangenwe nakho okungaphakathi kwendlu. Kungakho abathengisi be-digital signage behlinzeka ngezinhlelo ezengeziwe zokuhlaziya ukuze bathole imininingwane ebalulekile kumakhasimende, ukuze bakwazi ukuzibandakanya kangcono.
UMatthias Woggon, oyi-CEO, ozibonele ngamehlo, waveza ukungena kwakhe kweDigital Signage Future Trends Report ukuthi abathengisi basebenzisa izinzwa ezisondelene namakhamera wokuqashelwa kobuso ukubona imininingwane ebalulekile mayelana nekhasimende, njengokuthi ngabe babheka umkhiqizo noma umbukiso.
"Ama-algorithms anamuhla ayakwazi ukubona imingcele efana nobudala, ubulili nesimo somoya ngokuhlaziya ukubukeka kobuso bekhamera. Ngaphezu kwalokho, ama-touchscreens angalinganisa ukuthintwa kokuqukethwe okuthile futhi angahlola ukusebenza ngqo kwemikhankaso yokukhangisa kanye nokubuya kwemali, ”kusho uWoggan. "Inhlanganisela yokuqashelwa kobuso kanye nobuchwepheshe bokuthinta ivumela ukukala ukuthi bangaki abantu abasabela kulokhu okuqukethwe futhi kusize ekwakhiweni kwemikhankaso ehlosiwe nasekusebenzeni okuqhubekayo.
Izimpawu zedijithali futhi ziletha okuhlangenwe nakho kwe-omnichannel yokuxhumana ukuze uhlanganyele namakhasimende. U-Ian Crosby, iphini likamongameli wezentengiso nokumaketha kweZytronic, wabhala lapho ebhala incwadi yeDigital Signage Future Trends Report mayelana ne-Ebekek, ongumama nomthengisi womkhiqizo wezingane eTurkey. I-Ebekek isebenzisa izibonakaliso ezisebenzayo zedijithali ukuhlanganisa i-ecommerce kanye nokuthengisa okusizwayo. Amakhasimende angabhekabheka kulo lonke uhla lwemikhiqizo futhi athenge ngokuzimela noma acele umsizi wokuthengisa usizo.
Ukuhlolwa kombiko weDigital Signage Future Trends 2018 kuqinisekisile lo mkhuba wokwandisa okuhlangenwe nakho. Amaphesenti angama-50 abathengisi bathi bathola ama-touchscreens elusizo kakhulu kwizimpawu zedijithali.
Isimo esikhudlwana sazo zonke lezi zibonelo, ukushukumisa imidiya engaphenduki, ngokusho kwebhulogi le-Digital Signage Future Trends Report blog ka-Ge9rey Plt, umqondisi weRealMotion
“Lobu buchwepheshe obukhona obusebenzayo bufuna into eyodwa eyodwa. Amandla wokwenza, ukuhlaziya kanye nokwenza izinto emhlabeni odinga izixazululo zesikhathi sangempela, ”kusho uPlatt.
Emkhathini ongaphakathi, izibonakaliso zedijithali zikhula zombili ngokuya ngezikhudlwana, ukubonisa okukhulu nge-software entsha futhi kuncane, njengoba izitolo zikaMama noPop zibonisa ukubonakala okulula ngamanani amakhulu.
UChristopherson waveza ukuthi abasebenzisi bedijithali kanye nabathengisi bedijithali bebelokhu bekhulisa izixazululo ezidala ababukeli ababandakanyekayo. Isinyathelo esikhulu esilandelayo lapho zonke izingcezu ziwela endaweni, futhi siqala ukubona ukuthunyelwa okuguquguqukayo okunamandla kugcwala ezimakethe zezinkampani ezinkulu nezinkulu.
"Isinyathelo esilandelayo ukubeka ucezu lwe-analytics," kusho uChristopherson. "Uma nje amagagasi wokuqala walezi zinhlelo ezigcwele zohlelo usuqedile, ungalindela ukuthi lo mkhuba uthathe njengomlilo wasendle njengoba abanini bebona inani elengeziwe elikunikezayo."